OoVimba baseNigeria-Funda ukuRhweba
UMphathiswa waseNigeria ukhalimela iCrypto Clampdown yeCBN-Ibiza uLawulo
Kwinto ebonakala ngathi inkcaso kwisimo seBhanki Enkulu yaseNigeria malunga ne-cryptocurrencies, umphathiswa ohleliyo woburhulumente baseNigeria ucele ukulawulwa kweshishini le-crypto, endaweni yokuvalwa ngokuthe ngqo okanye ukucinezelwa.
UClem Agba, uMphathiswa kaRhulumente weBhajethi kunye noCwangciso lweSizwe lwaseNigeria uxelele i-CBN ukuba ukunyanzelisa i-crypto akuyona indlela yokuhamba kodwa ukuba umgaqo ocinga phambili uya kuba luncedo ngakumbi kwisizwe saseNtshona Afrika.
Umphathiswa wenza amagqabantshintshi kudliwano-ndlebe kunye neBloomberg, apho waphinda wabuza ibango lokuba i-CBN inegunya lokulawula imali ye-crypto. U-Agba waxoxa ngelithi akukho mthetho unika naliphi na iqumrhu elilawulayo igunya elinjalo. Umphathiswa wachaza ukuba:
"Ekubeni imithetho yethu ekhoyo ayinakucacisa ngokucacileyo ukuba ngubani onegunya lokulawula imali ye-cryptocurrensets, kunokubakho imfuneko yequmrhu elongezelelweyo lokudlala loo ndima."
UMphathiswa uAgba Ubiza iSebe leNtsebenziswano ekuPhuhliseni iCrypto Space yaseNigeria
Ngaphambi komyalelo we-CBN we-crypto nge-5 kaFebruwari kulo nyaka, iKhomishoni yezoKhuseleko kunye noTshintshiselwano lwaseNigeria kunye ne-CBN bakhuphisana nelungelo lokulawula indawo ye-crypto eNigeria. Kwingxelo ye-Bitcoin.com yeNdaba kunyaka ophelileyo, i-SEC yaseNigeria ibhale ii-cryptocurrencies njengezibambiso kuxwebhu lwezikhokelo ze-crypto.
Nangona kunjalo, ngokulandela umyalelo we-CBN kwiibhanki zorhwebo zokumisa iinkonzo kumashishini e-crypto ukuwathintela ekufikeleleni inkqubo yezemali, i-SEC yamisa izikhokelo zayo. Ukuza kuthi ga ngoku, i-CBN ibonakala ngathi ithathe uxanduva lokongamela ishishini lelizwe le-crypto.
Ethetha ngemeko yendawo yokulawula i-crypto kwilizwe, umphathiswa waphawula ukuba:
"Kubalulekile ukuba bonke abachaphazelekayo bajonge umdlali ngamnye njengeqela eliphambili kwindawo esempilweni ye-crypto eNigeria."
Ngeli xesha, ngaphandle kokuma ndlongo CBN ngokuchasene cryptocurrencies, ishishini liye laqhubeka ukukhula njengoko abantu baseNigeria banyusa imfuno ye-asethi yedijithali. Ngo-Okthobha, i-Learn2Trade inike ingxelo yophando lwe-Finder olubonisa ukuba iNigeria yaqhayisa ngamanani aphezulu obunini be-crypto kwihlabathi jikelele. Ngale nto, umntu uyazibuza ukuba kutheni abasemagunyeni besilwa ngokuzimisela ukucinezela ishishini le-cryptocurrency.
tags I-Central Bank yaseNigeria, Cryptocurrency, Nayijeriya, IMIMISELO
IBhanki eNkulu yaseNigeria ishenxisa iSithintelo sangaphambili kuThintelo lweDijithali yemali
U-Adam Lamtek, igosa eliphezulu kwi-Central Bank yase-Nigeria (i-CBN), uwaphikile amabango okuba ibhanki ithintele ukusetyenziswa kwemali ye-cryptocurrensets. Endaweni yoko, uLamtek uqaphele ukuba isikhokelo seziko sisebenza kwicandelo logcino kuphela.
Le ngxelo kaLamtek, owayethethe egameni le-CBN iRhuluneli u-Godwin Emefiele, iza kwinyanga enye emva kokuba i-CBN ikhuphe isikhokelo kwiibhanki ukuba ziyeke ukuququzelela ukuthengiselana okunxulumene ne-cryptocurrency eNigeria ngoFebruwari 5. Ukusukela ngoko, ivolumu yokurhweba kwindawo enye Ukutshintshiselana kuye kwehla kakhulu, ngelixa iingxelo zibonisa ukuba i-peer-to-peer (P2P) ivolumu yokurhweba inyukile ngexesha elinye.
Ngeli xesha, amarhe sele eqalile ukusasazeka ukuba eyona bhanki iphambili yayizicwangciso zokonga ukubamba intengiselwano ye-P2P kumaqonga anjengeBinance.
Nangona kunjalo, kwingxelo yakhe yamva nje, uLamtek ucacisile ukuba umyalelo we-CBN awukuvali ukurhweba nge-cryptocurrency.
Emva kokuba i-CBN ikhuphe lo myalelo, iinkokheli ezininzi ezivela eNigeria blockchain kunye nendawo ye-fintech bavakalise ukungoneliseki kwabo sisigqibo seziko. Enye yezi nkokeli, u-Adedayo Adedajo, uMlawuli oPhetheyo e-Jerulida Africa DLT, uphawule kudliwanondlebe lwakutsha nje ukuba uyakuxhasa ukwanda kolawulo kwimizi-mveliso, kodwa ukuvalwa ngokungqalileyo kwakungaqhelekanga.
Uluntu luyalwa kwakhona
Isenzo se-CBN samva nje sagxekwa kakhulu luluntu lwe-cryptocurrency eNigeria, kubandakanya nosekela mongameli welizwe, u-Yemi Osinbanjo. U-Adebajo uqinisekisile ukuba utshintsho lwamva nje lwesimo sokugcina imali kwi-CBN kungenzeka ngenxa yenkcaso eyonyuswe luluntu. UAdebajo uqaphele ukuba:
"Masingakulibali ukuba iinzame zokuqala zazikrweca umphezulu kancinci njengoko urhwebo luqhubeka kumaqonga oontanga nangona ulwalathiso lwe-CBN. Ukuvumela urhwebo ukuba luqhubeke akunakuthiwa luxhomekeke kumandla e-CBN kwakhona njengoko icandelo lezemali linikezelwe kwiindawo ezithile. ”
Ngelixa i-CBN ingenawo amandla okuthintela ukuthengiswa koontanga, u-Adebajo uthi utshintsho lwakutshanje "Yindlela eya phambili esithembele kuyo yonke imizamo eqhubekayo yokulawula ishishini, ukwamkelwa kuya kuba kubanzi kwaye kukhawuleze."
tags CBN, Cryptocurrency, iindaba, Nayijeriya
Ii-ATM zeBitcoin: Yaziswa kwiSizwe esikhulu seAfrika, eNigeria
Ukuhlaziywa: 1 April 2020
IBlockstale BTM, inkampani ethe yasungula iATM kwilizwe laseLagos iDazey Lounge kunye neRestaurant, iceba ukwazisa ngaphezulu kweeterminal ezingama-30 kuyo yonke iNigeria.
"Ukujonga uninzi lwezinto ezixhalabisayo ezimalunga nemali yedijithali eNigeria, abantu baseNigeria ngabona baphambili abathengisa imali e-Afrika," u-CEO kunye nomnini weBlockstale, uDaniel Adekunle, uxelele oonondaba bendawo ngo-Epreli 1.
I-Adekunle iseke ii-ATM zayo zeBitcoin ngokubambisana ne-Shenzhen, e-China esekwe kubuchwephesha.
I-ATM ye-15 ye-ATM yase-Afrika yaziswa eNigeria
Ngaphandle kokubamba inani lotshintshiselwano elikhulayo e-Afrika, iNigeria lilizwe lesibhozo kwilizwekazi eliqhuba i-Bitcoin ATM-yeBlockstale ekufuneka yenziwe i-15 kwi-Afrika iphela.
UMzantsi Afrika unee-crypto-ATM ezisixhenxe, iGhana isebenza ezibini, kwaye iBotswana, iDjibouti, iKenya, iUganda kunye neZimbabwe zonke zinesiphelo esinye, ngokweCoinATMRadar.
Njengoko iNigeria imele uqoqosho olukhulu noluntu eAfrika, iBitcoin ATM yelizwe yokuqala inokusebenza njengendawo yokwamkelwa kwilizwekazi ngokubanzi. Isiphelo sikaCoinstale sisibini saseNtshona Afrika iBitcoin ATM.
IVolum Falls elandela ukuVavanywa kweeNgingqi ze-KYC eNigeria
Iintsuku ezidlulileyo zibonile kwi-LocalBitcoins malunga ne-220 Bitcoins, okanye i-1.38 yezigidi zeedola, kwi-peer-to-peer (P2P) yokutshintshiselana phakathi kwe-BTC kunye neNaira yaseNigeria.
Nangona kunjalo, emva kokuba inethiwekhi ye-P2P iphucule iikhrayitheriya zayo ze-KYC nge-Septemba ngo-2019, i-LocalBitcoins yaseNigeria iwele nge-50 yepesenti.
INigeria sele iqhubeka ngokukhokela imibuzo kaGoogle isiya 'kwiBitcoin' -kutyhala okuphindwe kabini kunedatha njengakwisizwe esikwindawo yesibini, e-Austria, iGoogle Trends ithi.
Amazwe amathathu kwabahlanu aphambili alinganisiweyo ayengama-Afrika ngokubhekisele kwimibuzo 'yeBitcoin' -kubandakanya uMzantsi Afrika kunye neGhana zibekwe kwindawo yesithathu neyesine, ngokufanelekileyo.
tags I-Bitcoin ATM, IBlockstale BTM, Nayijeriya
Ingozi yeBitcoin: Abantu baseNigeria baphakamisa iAlarm ngaphezulu kweelahleko ezivela kwiiSchemes ze-Cryptocurrency ezingekho mthethweni
Ukuhlaziywa: 13 Matshi 2020
Njengoko intetho isitsho, Ulwazi ngundoqo. Kwilizwe elihlala likhula apho inkqubela phambili yetekhnoloji isenzeka rhoqo ngomzuzu, kubalulekile ukuhlala unolwazi ngezibakala.
Eyona asethi iphambili ye-crypto ngentengo yentengiso, i-Bitcoin yayibaleke ngoDisemba 2017; yabetha i-ATH yayo ye-20,000 yeedola eyayibeka kwindawo ebonakalayo, ngaloo ndlela itsala umdla kwihlabathi liphela. ENigeria, lelinye lawona mazwe anabantu abaninzi e-Afrika, eli nyathelo lodwa lazisa i-BTC kunxweme lwayo kwaye yayenza yathandwa. Nangona kunjalo, abanye abakhohlisi basebenzise eli thuba ukuqhatha abantu abangalindelanga kwimali abayisebenzele nzima. Aba bantu bangalindelanga batsha kwi-cryptography kwaye ababonakali ngathi banomdla kubuchwephesha, kodwa inye into exhaphakileyo kwaba bantu, bafuna iindlela ezintsha zokwenza ingeniso ekhawulezileyo neyongezelelekileyo njengoko uqoqosho lwesizwe luqhubeka ukuntengantenga phantsi korhulumente wangoku.
Njengoko kwabelwane ngengxelo, imodus operandi yezi skim iyahamba, izikimu zizenza ngathi zisemthethweni, kodwa inyani kukuba babelana ngokufana nepiramidi kunye nezikimu zePonzi, emva koko abaqalisi bathi benza inzuzo ngokuqikelela ukunyuka kwamaxabiso I-cryptocurrensets ngokusebenzisa i-akhawunti yokuthengisa ye-CFD ngelixa abanye besithi bayayifumana ingeniso yabo ngokuthengiselana ngeemali ezahlukeneyo ngokutshintshiselana nge-crypto.
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ndibone ixabiso leBitcoin (BTC) lisusela kwi-28.35% ukusuka kwi-7,650 yeedola ukuya kwi-5,500 24 yeedola, ukubulawa kwabantu kuqhubekile kwaye iBitcoin yehle ngokukhawuleza ngama-4,679%. Oku kuzise ixabiso kwi $ 2020, i-2019 entsha esezantsi kunye nexabiso lokugqibela ukurekhodwa ukusukela ngo-Epreli XNUMX.
Ukubawa, Ukungazi Kuhlala kuseBhane
Esona sizathu sixhaphakileyo sokuba abantu baphulukane nemali yabo kwizikim zobuqhetseba kukubawa okuvela kumnqweno ogqithisileyo wokwenza imali ngokukhawuleza. Ukungazi kuye kwachaphazeleka njengoko aba bagxeki benza i-rhetoric kwi-2017 BTC yokubaleka endle ethembisa abatyali mali kwi-ROI enkulu ngexesha elifutshane. Ayisiyiyo kuphela indawo yabantu baseNigeria, kodwa amaqumrhu alawulayo nawo abonakala ngathi alibaleki malunga nenkqubela phambili yamva yendawo ye-crypto. Amapolisa aseNigeria nawo ngokufanayo awazi nto okanye akukho nto malunga nemali ezigcina imali kunye neBlockchain ke ngoko isandla somthetho sifinyeziwe xa sijongana nabona bantu benza obu bubi.
IKhomishini yoKhuseleko noTshintshiselwano (i-SEC) eliliqela elilawula iiasethi zedijithali kunye nokukhuseleka kuchazwe kutshanje ukuba inkqubo-sikhokelo yolawulo isecaleni kwicandelo lemali edijithali. Inkqubo yokhuseleko lwe-cyber, u-Anthony Ogbo ukhuphe ngaphezulu ukuba isisombululo sikurhulumente ukudala inkqubo yemali eyomeleleyo kunye nommiselo ukulungiselela i-cryptocurrensets kunye nokubonelela ngemfundo ye-crypto yee-arhente zokunyanzeliswa komthetho.
tags Bitcoin, BTC, Ubuqhetseba beDijithali yemali, Nayijeriya, YeKhomishini yoKhuseleko noTshintshiselwano (i-SEC)